EximiousSoft Logo Designer 3.00 Patch...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Eximious Soft Logo Designer 3.00 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! ဒီကောင်လေးကတော့ သုံးရတာ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်...!သူငယ်ချင်းတွေ သုံးရတာ အဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့ရင် Cbox မှာအော်သွားနိုင်ပါတယ်...!အောက်မှာ ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ LOGO လေးတွေ ပြထားပါတယ်...!ဒီကောင်လေးဟာ LOGO သီးသန့် လုပ်တဲ့ Software လေးပါ...!ကိုကြိုက်တဲ့ ပုံဒီဇိုင်းလေးတွေကိုလည်း ထည့်လို့ရတယ်...!ဇော်ဂျီဖောင့်လည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်...!စိတ်ကြိုက်သာ ကလိပေတော့...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 8.29 MB ရှိပါတယ်...! စိတ်ဝင်စားရတော့ အောက်မှာ ကျွန်တော် Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
1.Don't open application
2.Copy Catch to folder Logo Designer v3.00
3.Run and Click Patch
"ဒီမှာယူသွားပါ..." (8.29 MB)
အသိပညာ အတက်ပညာ တိုးပွားနိုင်ပါစေ...!
1 Response to EximiousSoft Logo Designer 3.00 Patch...!
ဒီဆော့ဝဲလ်လေး ဒေါင်းလော့လုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။